3D ပရင်တာများအတွက် နောက်ဆုံးလမ်းညွှန် | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
3D ပရင်တာများအတွက် အဆုံးစွန်လမ်းညွှန်
ဣဇာက်သည် | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 25/02/2022 13:33 | ပုံနှိပ် 3D
ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်ရေးတွင် အပန်းဖြေကဏ္ဍနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် နည်းပညာတို့၌ အသုံးချမှုနယ်ပယ်များ ပိုများလာပါသည်။ 3D ပရင်တာများသည် သင်ပုံနှိပ်သည့်ပုံစံကို တော်လှန်ရန် ရောက်ရှိလာပါပြီ။ သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုများမှ သက်ရှိတစ်ရှူးများနှင့် အိမ်များအထိ၊ သို့မဟုတ် မော်တာအားကစားအတွက် လေခွင်းအားဖြစ်စေသော အစိတ်အပိုင်းများအထိ ပါဝင်နိုင်သည့် အဆောက်အဦအသစ်များကို တည်ဆောက်ကြသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အထိ 2D ပုံနှိပ်စက်သည် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အများစုသည် ရိုးရှင်းသော XNUMXD စာရွက်ပေါ်တွင် ပုံများ သို့မဟုတ် စာသားအစား အရာဝတ္ထုများကို ပရင့်ထုတ်ရန် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြသည်။ အခုဆို နည်းပညာတွေ အရမ်းရင့်ကျက်နေပြီလေ။ မရေမတွက်နိုင်သောနည်းပညာများ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မော်ဒယ်များစသည်တို့ ဤလမ်းညွှန်တွင် ဤထူးခြားသော ပုံနှိပ်စက်များအကြောင်း သင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
1 voxel ဆိုတာဘာလဲ။
2 3D ပရင်တာဆိုတာဘာလဲ
2.0.1 3D ပုံနှိပ်ခြင်းသမိုင်း
2.1 additive manufacturing သို့မဟုတ် AM ဆိုတာဘာလဲ
2.2 Bioprinting ဆိုတာ ဘာလဲ။
2.3 3D ပရင်တာများ အလုပ်လုပ်ပုံ
3 3D ဒီဇိုင်းနှင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်း။
3.1 3D ပရင်တာဆော့ဖ်ဝဲ
3.1.2 Ultimaker ကုထုံး
3.1.10 mesh ဓာတ်ခွဲခန်း
3.2 ပုံနှိပ် 3D
4.0.1 STL ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
4.0.2 3D နမူနာများ
4.0.3 မော်ဒယ်အစစ်မှ (3D စကင်န်ဖတ်ခြင်း)
5 3D ပရင်တာ၏ အသုံးချမှုများနှင့် အသုံးပြုမှုများ
5.1 အင်ဂျင်နီယာ ရှေ့ပြေးပုံစံများ
5.3 လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဒီဇိုင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း။
5.4 အပန်းဖြေခြင်း- 3D ပရင်တာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အရာများ
5.6 ဆေးပညာတွင် 3D ပရင်တာများ- သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ ခြေတုလက်တုများ၊ ဇီဝပရင့်ထုတ်ခြင်း။
5.7 ပုံနှိပ်အစားအစာ / အစားအစာ
မရင်းနှီးသေးရင် voxel3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် အရေးကြီးသောကြောင့် ၎င်းကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် သုံးဖက်မြင်အရာဝတ္ထုကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကုဗယူနစ် အင်္ဂလိပ် «volumetric pixel» ၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
ကွန်ပြူတာဂရပ်ဖစ်ရှိ မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင် သက်ရောက်သည့် ထုထည်တစ်ခု၏ အနိမ့်ဆုံးယူနစ်ဖြစ်သည့် texel (texture element သို့မဟုတ် texture pixel) ကဲ့သို့သော အခြားယူနစ်များ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားတစ်ခုကို ရည်ညွှန်းသော neologism ဖြစ်သည့် tixel (tactile pixel)၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များအတွက် haptic နည်းပညာဖြင့် မတူညီသော အသွင်အပြင်များ၏ ထိတွေ့မှုကို အတုယူနိုင်စေပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် ဖြစ်မှာပါ။ pixel တစ်ခု၏ 2D နှင့်ညီမျှသည်။. အထက်ပုံတွင် သင်မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ထို 3D မော်ဒယ်ကို cubes များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားပါက၊ ၎င်းတို့တစ်ခုစီသည် voxel ဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့သော အဆင့်မြင့် 3D ပရင်တာများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန် ပုံနှိပ်နေစဉ်အတွင်း voxel တစ်ခုစီ၏ ထိန်းချုပ်မှုကို ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် ၎င်းသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို သတ်မှတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
3D ပရင်တာသည် ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းတစ်ခုမှ ထုထည်ဖြင့် အရာဝတ္ထုများကို ပုံနှိပ်ထုတ်နိုင်သော စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ ပရင်တာကဲ့သို့ပင်၊ ပြားချပ်ချပ် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ခြင်းအစား 2D ဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ အတိုင်းအတာသုံးမျိုး (အနံ၊ အလျားနှင့် အမြင့်)၊) ဤရလဒ်များကို ရရှိနိုင်သည့် ဒီဇိုင်းများသည် 3D သို့မဟုတ် CAD မော်ဒယ်မှ လာနိုင်ပြီး တကယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုမှပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ XNUMXD စကင်န်ဖတ်ခြင်း။.
သူတို့လုပ်နိုင်တယ်။ အမျိုးမျိုးကို ပုံနှိပ်ပါ။ကော်ဖီခွက်ကဲ့သို့ ရိုးရှင်းသောအရာများမှ၊ သက်ရှိတစ်ရှူးများ၊ အိမ်များ၊ စသည်ဖြင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အရာများအထိ၊ တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းတို့၏ ပုံနှိပ်ထားသော ပုံများကို စက္ကူမှ အသက်ဝင်စေလိုသူ အများအပြား၏ အိပ်မက်သည် ဤနေရာတွင် ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအပြင် အိမ်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် လုံလောက်သော စျေးသက်သာပါသည်။
3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏သမိုင်းကြောင်းသည် အလွန်မကြာသေးဟုထင်ရသော်လည်း အမှန်မှာ ၎င်းသည် ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကြာ ပြန်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ 1976 ခုနှစ်မှ inkjet ပရင်တာပုံနှိပ်မှင်များကို ထုထည်ဖြင့် အရာဝတ္ထုများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ပစ္စည်းများဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်းမှင်ကို အစားထိုးရန် တိုးတက်မှုရှိလာခဲ့ရာ၊ ဤနည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းများနှင့် လက်ရှိစက်များအထိ အမှတ်အသားပြုခြင်း-
1981 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး 3D ပုံနှိပ်စက်ကို မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည်။ သူလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာ Hideo KodamaNagoya Municipal Industrial Research Institute (Japan) မှ၊ အိုင်ဒီယာမှာ ချစ်ပ်ပြားများပြုလုပ်ပုံနှင့်ဆင်တူသော ဓာတ်ပုံ-အာရုံခံစေးစေးကို အသုံးပြု၍ ပေါင်းထည့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် သူတီထွင်ခဲ့သော မတူညီသောနည်းလမ်း ၂ ခုကို အသုံးပြုရန် စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အတိုးနှင့် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်းကြောင့် သူ၏ပရောဂျက်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
ဒီဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာပင် ပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာများ၊ Alain Le Méhauté၊ Olivier de Wittte နှင့် Jean-Claude AndréUV curing ဖြင့် photosensitive resins များကို ခိုင်မာစေခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို စတင်စုံစမ်းခဲ့ပါသည်။ လျှောက်လွှာဧရိယာမရှိခြင်းကြောင့် CNRS သည် စီမံကိန်းကို အတည်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ 1984 တွင် မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် စွန့်လွှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ချားဟူးလ်1984 ခုနှစ်တွင် သူသည် stereolithography (SLA) ကို တီထွင်ကာ 3D Systems ကုမ္ပဏီကို ပူးတွဲရှာဖွေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်မှ 3D အရာဝတ္ထုကို ပရင့်ထုတ်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
La ပထမဆုံး SLA အမျိုးအစား 3D စက် ၎င်းကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ရောင်းချခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏စျေးနှုန်းများသည် အလွန်မြင့်မားပြီး အခြေခံကျသော စက်ကိရိယာများ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
၁၉၉၉ တွင် နောက်ထပ် ကြီးကျယ်သော မှတ်တိုင်တစ်ခုကို အမှတ်အသားပြုခဲ့ပြီး၊ ဤအကြိမ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဇီဝပုံနှိပ်ခြင်း။အထူးသဖြင့် ပင်မဆဲလ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ထားသော ဓာတုအလွှာကို အသုံးပြု၍ ဆီးအိမ်အတွင်း လူ၏အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤမှတ်တိုင်သည် Wake Forest Institute for Regenerative Medicine တွင် မူလအစရှိပြီး အစားထိုးအင်္ဂါများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တံခါးဖွင့်ထားသည်။
El 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ကျောက်ကပ်သည် 2002 ခုနှစ်တွင် ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် တိရစ္ဆာန်၏သွေးကို စစ်ထုတ်ပြီး ကျင်ငယ်ရည်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသော အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်သော မော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား တူညီသောအင်စတီကျုတွင်လည်း ဖန်တီးခဲ့သည်။
Adrian Bowyer သည် RepRap ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 2005 ခုနှစ်တွင် University of Bath တွင်၊ ၎င်းသည် စျေးပေါသော 3D ပရင်တာများကို ကိုယ်တိုင်ပုံတူပြုလုပ်ထားသော open source မှ အစပြုမှုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစိတ်အပိုင်းများကို print ထုတ်နိုင်ပြီး ကဲ့သို့သော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကာ၊ 3D ကြိုးများ.
တစ်နှစ်အကြာတွင်၊ 2006 ခုနှစ်တွင် SLS နည်းပညာ ရောက်ရှိလာသည်။ လေဆာကြောင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ၎င်းနှင့်အတူ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး တံခါးများကို ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်သည် ပထမဆုံး ပုံနှိပ်စက်နှင့်ဆိုင်သော နှစ်ဖြစ်ပေမည်။ ကိုယ်တိုင်ပုံတူလုပ်နိုင်စွမ်း. ၎င်းသည် RepRap ၏ Darwin ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်တွင်ပင်၊ အခြားသူတို့၏ကိုယ်ပိုင် 3D ပရင်တာများပေါ်တွင် ပရင့်ထုတ်နိုင်စေရန် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများက ၎င်းတို့၏ 3D ဒီဇိုင်းများကို မျှဝေနိုင်သည့် ဝဘ်ဆိုက်များ ပူးပေါင်းဖန်တီးရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ယခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။
တွင်လည်း သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ 3D ခြေတုလက်တုပါမစ်. 2008 သည် ပုံနှိပ် ခြေတုလက်တုဖြင့် ပထမဆုံးလူ လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်နှစ် ဖြစ်လိမ့်မည်။
2009 သည်နှစ်ဖြစ်သည်။ Makerbot နှင့် အစုံ 3D ပရင်တာများကို အသုံးပြုသူများစွာသည် ၎င်းတို့ကို စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် printer ကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်စေရန်။ အဲဒါက ထုတ်လုပ်သူနဲ့ DIY ကို ဦးတည်တယ်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ဒေါက်တာ Gabor Forgacs သည် သွေးကြောများကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းကြောင့် ဇီဝပရင့်ထုတ်ခြင်းတွင် နောက်ထပ် ခြေလှမ်းကြီးတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
El ပထမဆုံး ပုံနှိပ်လေယာဉ် 3D ကို ဆောက်သမ်တန် တက္ကသိုလ်မှ အင်ဂျင်နီယာများက ဖန်တီးကာ 2011 ခုနှစ်တွင် ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မောင်းသူမဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး7ရက်အတွင်း ဘတ်ဂျက် ယူရို 7000 ဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ယင်းကြောင့် အခြားသော ထုတ်ကုန်များစွာ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ ဤနှစ်တွင်ပင် စျေးနှုန်း ယူရို 12.000 နှင့် 60.000 ကြားရှိသော Kor Ecologic Urbee ၏ ပထမဆုံး ပုံနှိပ်ထားသော ကားရှေ့ပြေးပုံစံ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ပုံနှိပ်ခြင်းကဲ့သို့သော မြင့်မြတ်သောပစ္စည်းများကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စတာလင်ငွေနှင့် 14kt ရွှေထို့ကြောင့် တိကျသော ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ စျေးသက်သာသော အပိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းကြောင့် ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စျေးကွက်သစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
2012 မှာ ရောက်ပါမယ်။ ပထမဆုံး ခြေတုလက်တု တပ်ဆင်ခြင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ နှင့် ဒတ်ခ်ျ သုတေသီများ ၏ ကျေးဇူးကြောင့် 3D ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
လောလောဆယ်မှာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးက မရပ်တန့်သေးပါဘူး။ အပလီကေးရှင်းအသစ်များ၊ ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပါ။လုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်များအလိုက် ဆက်လက်တိုးချဲ့သွားရန်။
လောလောဆယ် ဆိုရင်တော့ အံ့သြစရာပါပဲ။ 3d ပရင်တာတစ်လုံးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။စျေးအသက်သာဆုံးနှင့် အသေးငယ်ဆုံးကိစ္စတွင် ယူရို 100 သို့မဟုတ် ယူရို 200 ကျော်၊ အဆင့်မြင့်ဆုံးနှင့် ပိုကြီးသည့်ကိစ္စများတွင် ယူရို 1000 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ နှင့် ကဏ္ဍစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ယူရိုထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်ကျသည့်အချို့ပင်။
additive manufacturing သို့မဟုတ် AM ဆိုတာဘာလဲ
3D ပုံနှိပ်ခြင်းထက် ဘာမှ မပိုပါဘူး။ additive ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဆိုလိုသည်မှာ 3D မော်ဒယ်များကို ဖန်တီးရန်အတွက် ပစ္စည်းအလွှာများကို ထပ်နေသော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကနဦးဘလောက် (စာရွက်၊ အကွက်၊ တုံး၊ ဘား၊...) ကို အခြေခံထားသည့် နုတ်ထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ပစ္စည်းမှ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် အောင်မြင်သည်အထိ တဖြည်းဖြည်း ဖယ်ရှားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နုတ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် သစ်သားတုံးဖြင့် စတင်သည့် စက်ပေါ်၌ ထွင်းထားသောအပိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တော်လှန်ရေးနည်းလမ်း အိမ်တွင် စျေးပေါသော အရာဝတ္ထုများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဗိသုကာပညာရှင်များအတွက် မော်ဒယ်များ၊ စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ရှေ့ပြေးပုံစံများ စသည်တို့ကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသည် မှိုများ၊ ထုတ်ယူခြင်း စသည်တို့ကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ယခင်က မဖြစ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်စေခဲ့သည်။
Bioprinting ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဇီဝပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် 3D ပရင်တာများဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် အထူးထည့်သွင်းထုတ်လုပ်သည့် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ရလဒ်များသည် inert ပစ္စည်းများနှင့် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ မေ သက်ရှိတစ်ရှူးများနှင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများဖြစ်စေသည်။လူ့အရေပြားမှ အရေးကြီးသော အင်္ဂါတစ်ခုအထိ၊ ခြေတုလက်တု သို့မဟုတ် အစားထိုးထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သော ဇီဝသဟဇာတပစ္စည်းများကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဒီကနေ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းနှစ်ခု:
အဆောက်အဦတစ်ခု၊ အထောက်အကူတစ်မျိုး သို့မဟုတ် ငြမ်းတစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ biocompatible ပိုလီမာများ ၎င်းတို့ကို ခန္ဓာကိုယ်က ငြင်းပယ်ခြင်း မပြုရန်နှင့် ဆဲလ်များက ၎င်းတို့ကို လက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံများကို ဇီဝဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဆဲလ်များဖြင့် စုစည်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့သည် အိမ်ရှင်သက်ရှိများ၏ ဆဲလ်များဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် အလွှာအလိုက် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ သို့မဟုတ် တစ်ရှူးများကို ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းများကို အသုံးပြုမည့်အစား၊ အသက်ရှင်သောဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုများ ပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ရန် biopaper (ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သောပစ္စည်း) ဟုခေါ်သော တွယ်ကပ်နည်း။
3D ပရင်တာများ အလုပ်လုပ်ပုံ
El 3d ပရင်တာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ၎င်းသည် ထင်ထားသည်ထက် များစွာရိုးရှင်းသည်-
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် အစမှ စတင်နိုင်သည်။ 3d မော်ဒယ်လ် သို့မဟုတ် သင်လိုချင်သော မော်ဒယ်ကို ထုတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဖန်တီးပြီးသော ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နှင့် 3D မော်ဒယ်ကို တကယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုမှ ရယူရန် 3D စကင်နာကိုပင် အသုံးပြုပါ။
အခု မင်းမှာရှိတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် 3D မော်ဒယ်ဆိုလိုသည်မှာ အရာဝတ္တု၏ အတိုင်းအတာနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များပါရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်မှ ဖြစ်သည်။
အောက်ပါဖြစ်ပါသည် လှီးဖြတ်ခြင်း။3D မော်ဒယ်ကို အလွှာ ရာနှင့်ချီ သို့မဟုတ် ထောင်ချီသော အလွှာများ သို့မဟုတ် အချပ်များအဖြစ် "ဖြတ်" ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်။ ဆိုလိုသည်မှာ မော်ဒယ်ကို ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ခွဲနည်းဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူသည် ပရင့်ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သောအခါ၊ USB ကြိုး သို့မဟုတ် ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် PC သို့ ချိတ်ဆက်ထားသော 3D ပရင်တာ သို့မဟုတ် SD ကတ် သို့မဟုတ် ဘောပင်ဒရိုက်ပေါ်တွင် ဖြတ်သွားသည့် ဖိုင်သည် ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ပရင်တာ ပရိုဆက်ဆာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။.
အဲဒီကနေ ပရင်တာ သွားလိမ့်မယ်။ မော်တာများကိုထိန်းချုပ်ခြင်း။ ဦးခေါင်းကို ရွှေ့ရန် နှင့် နောက်ဆုံး မော်ဒယ် အောင်မြင်သည်အထိ အလွှာအလိုက် အလွှာကို ထုတ်ပေးသည်။ သမားရိုးကျ ပရင်တာတစ်လုံးနှင့် ဆင်တူသော်လည်း ထုထည်သည် အလွှာတစ်ခုပြီးတစ်ခု တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
အဲဒီအလွှာတွေကို ထုတ်ပေးတဲ့နည်း နည်းပညာအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။ 3D ပရင်တာများပါရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ထုထည်အားဖြင့် သို့မဟုတ် အစေးဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
3D ဒီဇိုင်းနှင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်း။
3D ပရင်တာဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ သိပြီးတာနဲ့ နောက်တစ်ခုက လိုအပ်သော software သို့မဟုတ် tools များကိုသိပါ။ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်။ ပုံကြမ်း သို့မဟုတ် အိုင်ဒီယာမှ တကယ့် 3D အရာဝတ္ထုသို့ သွားလိုပါက မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
3D ပရင်တာများအတွက် အခြေခံဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးအစားများစွာရှိကြောင်း သင်သိထားသင့်သည်-
တဖက်မှာလည်း အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ 3D မော်ဒယ်လ် သို့မဟုတ် 3D CAD ဒီဇိုင်း အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ဒီဇိုင်းများကို အစမှ ဖန်တီးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
တစ်ဖက်က ခေါ်တာရှိတယ်။ ပိုင်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲ3D မော်ဒယ်ကို 3D ပရင်တာပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ရန် သီးခြားညွှန်ကြားချက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် mesh ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဆော့ဖ်ဝဲ. MeshLab ကဲ့သို့သော ဤပရိုဂရမ်များသည် 3D ပရင်တာများ၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုပုံနှိပ်သည့်အခါ ပြဿနာဖြစ်စေသောအခါတွင် 3D မော်ဒယ်များ၏ meshes များကို ပြင်ဆင်ရန်အသုံးပြုပါသည်။
ဤတွင်အချို့သော အကောင်းဆုံး 3d ပုံနှိပ်စက်ဆော့ဖ်ဝဲအခကြေးငွေနှင့် အခမဲ့ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် 3d မော်ဒယ်လ် y CAD ဒီဇိုင်းအပြင် အခမဲ့ သို့မဟုတ် ပွင့်လင်းသော အရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲ၊
Google နှင့် နောက်ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ SketchUpနောက်ဆုံးတွင် Trimble ကုမ္ပဏီလက်သို့ ရောက်သွားသော်လည်း၊ ၎င်းသည် တစ်ဦးတည်းပိုင်နှင့် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ (ကွဲပြားသော ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များနှင့်အတူ) နှင့် ၎င်းကို Windows desktop ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ဝဘ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုခြင်း (မည်သည့် operating system နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဝဘ်ဘရောက်ဆာ) တို့အကြား ရွေးချယ်နိုင်ခြေလည်း ပါဝင်သည်။
ဒီပရိုဂရမ် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့် 3D မော်ဒယ်လ် အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို ဗိသုကာဒီဇိုင်းများ၊ စက်မှုဒီဇိုင်း စသည်တို့အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း ၎င်းသည် အဆောက်အဦအမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
Ultimaker ဖန်တီးထားသည်။ Cura၊ 3D ပရင်တာများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အက်ပလီကေးရှင်း မည်သည့်ပုံနှိပ်ခြင်းဘောင်များကို ပြုပြင်ပြီး G ကုဒ်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက် LGPLv3 လိုင်စင်အောက်တွင် ၎င်း၏ကုဒ်ကို ဖွင့်ထားသော်လည်း David Raan က ၎င်းကို ဤကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယခု open source ဖြစ်ပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း CAD ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်စေသည်။
အခုခေတ်မှာ အရမ်းရေပန်းစားနေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသုံးအများဆုံးထဲကကဏ္ဍအသီးသီးမှ သုံးစွဲသူပေါင်း ၁ သန်းကျော်ရှိသည်။
Prusa ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဖန်တီးလိုသည်။ ၎င်းသည် open source tool ဟုခေါ်သည်။ PrusaSlicer. ဤအက်ပ်သည် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ အလွန်ကြွယ်ဝပြီး အလွန်တက်ကြွသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသည်။
ဤပရိုဂရမ်ဖြင့် သင်သည် 3D မော်ဒယ်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သော မူရင်းဖိုင်များသို့ တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မူရင်း Prusa ပရင်တာများ.
ဤအခြားပရိုဂရမ်သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး နှစ်ခုစလုံးတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Microsoft Windows၊ macOS နှင့် GNU/Linux တွင်. Ideamaker သည် Raise3D ထုတ်ကုန်များအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းသည် သင့်ရှေ့ပြေးပုံစံများကို လျင်မြန်စွာ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် သင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
FreeCAD သည် အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် open source ပရောဂျက်ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းအတွက် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ 3D CAD. ၎င်းနှင့်အတူ သင်သည် Autodesk AutoCAD၊ အခပေးဗားရှင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်တွင် သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း မည်သည့်မော်ဒယ်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
၎င်းသည် အသုံးပြုရ ရိုးရှင်းပြီး အလိုလိုသိနိုင်သော အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုနှင့် လုပ်ဆောင်ရန် ကိရိယာများ ကြွယ်ဝသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အသုံးအများဆုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် OpenCASCADE ကိုအခြေခံသည်။ GNU GPL လိုင်စင်အောက်တွင် C++ နှင့် Python ဖြင့် ရေးသားထားသည်။
အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်လောကမှာ နောက်ထပ် အသိအကျွမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကြီးကို ပညာရှင်တော်တော်များများကတောင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပါဝါနှင့်ရလဒ်များ ကမ်းလှမ်းသည်။ Windows နှင့် Linux ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများစွာတွင် နှင့် GPL လိုင်စင်အောက်တွင် ရနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဆောင်ရွက်ပေးရုံသာမကဘဲ အလင်းရောင်၊ ပုံဖော်မှု၊ ကာတွန်းနှင့် သုံးဖက်မြင်ဂရပ်ဖစ် ဖန်တီးမှု ကာတွန်းဗီဒီယိုများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ပန်းချီကားများ စသည်တို့အတွက်၊ သို့သော် ၎င်းကို 3D မော်ဒယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး သင်ပုံနှိပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
၎င်းသည် FreeCAD နှင့်ဆင်တူသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် တစ်ဦးတည်းပိုင်နှင့် အခပေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြစ်သည်။ သင့်လိုင်စင်တွင် တစ်ခုရှိသည်။ စျေးနှုန်းမြင့်မားသော်လည်း ၎င်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်တွင် အသုံးအများဆုံးပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဤဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် သင်သည် 2D နှင့် 3D CAD ဒီဇိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ မြောက်မြားစွာသော textures စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းကို Microsoft Windows အတွက် ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်း၏ အားသာချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ DWF ဖိုင်များAutodesk ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Autodesk Fusion 360 ၎င်းသည် AutoCAD နှင့် များစွာတူညီသော်လည်း ၎င်းသည် cloud ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အခြေခံထားသောကြောင့် သင်အလိုရှိသောနေရာတိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ဤဆော့ဖ်ဝဲ၏ အဆင့်မြင့်ဆုံးဗားရှင်းကို အမြဲတမ်းရရှိထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည်လည်းအတိအကျစျေးပေါမဟုတ်သောစာရင်းသွင်းမှုများကိုလည်းပေးဆောင်ရလိမ့်မည်။
TinkerCAD သည် အခြားသော 3D မော်ဒယ်လ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းတွင်သုံးနိုင်သည်။သင်လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းမှ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာကို ဖွင့်ပေးသည့် ဝဘ်ဘရောက်ဆာတစ်ခုမှ၊ 2011 ခုနှစ်မှစတင်၍ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများရရှိလာခဲ့ပြီး 3D ပရင်တာများနှင့် ပညာရေးစင်တာများတွင်ပင် အသုံးပြုသူများကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ၎င်း၏သင်ယူမှုပုံစံသည် Autodesk ထက် များစွာပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းကို Linux၊ Windows နှင့် macOS တို့အတွက်ရရှိနိုင်ပြီး လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး open source ဖြစ်သည်။ MeshLab သည် 3D mesh လုပ်ဆောင်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ဤဆော့ဖ်ဝဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဤဖွဲ့စည်းပုံများကို တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ တင်ဆက်ခြင်း စသည်တို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲ SolidWorks Corp. မှ ဥရောပကုမ္ပဏီ Dassault Systèmes သည် 2D နှင့် 3D မော်ဒယ်များအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရှိဆုံး CAD ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ SolidWorks သည် Autodesk AutoCAD ၏အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။. ၎င်းသည် အခမဲ့မဟုတ်သလို open source လည်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Windows အတွက် ရနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Creo သည် အကောင်းဆုံး CAD/CAM/CAE ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 3D ပရင်တာများအတွက် သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် PTC မှ ဖန်တီးထားသော ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အား အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များစွာကို လျင်မြန်စွာနှင့် အလုပ်အနည်းငယ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်စေမည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ၎င်း၏ ပင်ကိုယ်အင်တာဖေ့စ်ကြောင့် အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် နုတ်ထွက်ခြင်းအတွက် အစိတ်အပိုင်းများအပြင် သရုပ်ဖော်ခြင်း၊ မျိုးဆက်သစ်ဒီဇိုင်း စသည်တို့အတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို သင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အခပေး၊ ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး Windows အတွက်သာဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းဆွဲရန် နောက်တစ်ဆင့်မှာ အမှန်တကယ်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဲဒါက အဲဒီဖိုင်ကို မော်ဒယ်နဲ့ တွဲလိုက်တာ 3D ပရင်တာသည် အလွှာများကို စတင်ထုတ်လုပ်သည်။ မော်ဒယ်ပြီးမြောက်ပြီး ဒီဇိုင်းအစစ်အမှန်ကို ရရှိသည်အထိ။
Este လုပ်ငန်းစဉ်သည် အနည်းနှင့်အများ ကြာနိုင်သည်။ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်း၊ အပိုင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ၎င်း၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။ ဒါပေမယ့် မိနစ်အနည်းငယ်ကနေ နာရီအထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ပရင်တာအား ပိုင်ရှင်မရှိဘဲ ထားနိုင်သော်လည်း၊ နောက်ဆုံးရလဒ်ကို ထိခိုက်စေသည့် ပြဿနာများအဆုံးသတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အလုပ်အား အခါအားလျော်စွာ စောင့်ကြည့်ရန် အမြဲကောင်းမွန်သော်လည်း၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ အပိုင်းကို 3D ပရင်တာပေါ်မှာ ပုံနှိပ်ပြီးတာနဲ့၊ ကိစ္စတော်တော်များများမှာ အလုပ်က အဲဒီမှာပဲ ပြီးဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တော့ တခြားသူတွေလည်း လာလေ့ရှိပါတယ်။ Post-processing ဟုခေါ်သော နောက်ထပ်အဆင့်များ အဖြစ်:
ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး နောက်ဆုံးပုံစံ၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် အခြေခံ သို့မဟုတ် ရပ်တည်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးမှုကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော နောက်ဆုံးအချောထည်ရရှိရန် မျက်နှာပြင်ကို သဲ သို့မဟုတ် ပွတ်ပေးပါ။
အရောင်တင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်း စသည်တို့ကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုများ၏ မျက်နှာပြင်ကို ကုသခြင်း။
သတ္တုအပိုင်းအစများကဲ့သို့ အချို့သောအပိုင်းများသည် မုန့်ဖုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များပင် လိုအပ်နိုင်သည်။
အပိုင်းအစတစ်ခုသည် ၎င်း၏အတိုင်းအတာကြောင့် တစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများခွဲထားရသည့်အခါတွင် အစိတ်အပိုင်းများ (စုပုံ၊ ကော်၊ ဂဟေဆက်ခြင်း...) တို့ပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကဏ္ဍကို ရေးထားပါတယ်။ မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ သို့မဟုတ် မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့် အဖြေများ 3D ပရင်တာ အသုံးပြုသောအခါတွင် ထိုသို့ဖြစ်တတ်သည်။ အတွေ့ရများဆုံးမှာ-
အမေးများဆုံးမေးခွန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ .stl ဖိုင်ကို သင် မည်သို့ဖွင့်နိုင် သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။. ဤတိုးချဲ့မှုသည် stereolithography ဖိုင်များကို ရည်ညွှန်းပြီး AutoCAD စသည်တို့ကဲ့သို့သော အခြားသော CAD ပရိုဂရမ်များကြားတွင် Dassault Systèmes CATIA ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်ပင် တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
STLs အပြင်၊ အခြားဖိုင်များ .obj ကဲ့သို့၊ .dwg, .dxfစသည်တို့ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အလွန်ရေပန်းစားပြီး မတူညီသော ပရိုဂရမ်များစွာဖြင့် ဖွင့်နိုင်ပြီး ဖော်မတ်များကြားတွင်ပင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
3D ပုံဆွဲခြင်းကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရန် အမြဲတမ်းမလိုအပ်ပါ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်း သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်များမှ ရုပ်ပုံများမှစ၍ လက်တွေ့အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ အရုပ်များ၊ ခြေတုလက်တုများ၊ မျက်နှာဖုံးများ၊ ဖုန်းများအထိ အဆင်သင့်လုပ်ထားသော မော်ဒယ်များကို သင်ရနိုင်သည်ကို သင်သိထားသင့်သည်။ ကိစ္စများ စသည်တို့ Raspberry Pi, ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။ ဤအရာများထဲမှ စာကြည့်တိုက်များရှိသော ဝဘ်ဆိုဒ်များ ပိုများလာပါသည်။ နမူနာများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပရင့်ထုတ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သင်၏ 3D ပရင်တာပေါ်တွင်။ အကြံပြုထားသောဆိုဒ်အချို့မှာ-
XYZ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းပြခန်း
မော်ဒယ်အစစ်မှ (3D စကင်န်ဖတ်ခြင်း)
နောက်တစ်မျိုးကတော့ သင်လိုချင်တာကို ပြန်ဖန်တီးဖို့ပါပဲ။ ပြီးပြည့်စုံသော ကိုယ်ပွား သို့မဟုတ် အခြား 3D အရာဝတ္ထု၏ ပုံတူ,aကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ 3d စကင်နာ. ၎င်းတို့သည် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ခြေရာခံရန်၊ မော်ဒယ်ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုပေးသည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။
3D ပရင်တာ၏ အသုံးချမှုများနှင့် အသုံးပြုမှုများ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 3D printers တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Application များစွာအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။. ပေးစွမ်းနိုင်သော လူကြိုက်အများဆုံးအသုံးပြုမှုများမှာ-
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်တွင် 3D ပရင်တာများ၏ ရေပန်းအစားဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာ လျင်မြန်သောပုံစံတူရိုက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ လျင်မြန်စွာရှေ့ပြေးပုံစံ. Formula 1 ကဲ့သို့သော ပြိုင်ကားတစ်စီးအတွက် အစိတ်အပိုင်းများရယူရန် သို့မဟုတ် အင်ဂျင်၏ရှေ့ပြေးပုံစံများ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာသည် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် စက်ရုံသို့ ပေးပို့ရမည်ဆိုသည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော အစိတ်အပိုင်းကို ရရှိရန် ခွင့်ပြုပေးခြင်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံများကို စမ်းသပ်ပါ။ နောက်ဆုံး မော်ဒယ်က မျှော်လင့်ထားသလို အလုပ်ဖြစ်မလား။
ဓာတ်ပုံ- © www.StefanoBorghi.com
ဟုတ်ပါတယ်၊၊ အထက်ဖော်ပြပါများနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပါက ၎င်းတို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါ။ ဗိသုကာပညာရှင်များအတွက်၊ သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် မထုတ်လုပ်နိုင်သော အချို့သောအပိုင်းများကို တည်ဆောက်ပါ၊ နမူနာ သို့မဟုတ် မော်ဒယ်များအဖြစ် အဆောက်အအုံများ၏ ရှေ့ပြေးပုံစံ သို့မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထုများကို ဖန်တီးပါ။
ထိုမျှသာမက ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကွန်ကရစ်ပုံနှိပ်စက်များ နှင့် အခြားပစ္စည်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေးစားစွာဖြင့် အိမ်များကို လျင်မြန်စွာ ပိုမိုထိရောက်စွာ ပုံနှိပ်နိုင်စေရန် တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ အနာဂတ်ကိုလိုနီနယ်များအတွက် ဤပရင်တာအမျိုးအစားကို အခြားဂြိုဟ်များထံ ယူဆောင်ရန်ပင် အဆိုပြုထားသည်။
လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဒီဇိုင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း။
အကျယ်ပြန့်ဆုံးသော အရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်လက်ဝတ်ရတနာ. စိတ်ကြိုက်ဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့် ထူးခြားပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သောအပိုင်းများကို ရယူရန်နည်းလမ်း။ အချို့သော 3D ပရင်တာများသည် နိုင်လွန် သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသော အရောင်များဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရိုက်နှိပ်နိုင်သော်လည်း အချို့သော ကြေးစားသတ္တုများဖြစ်သည့် ရွှေ သို့မဟုတ် ငွေကဲ့သို့သော မြင့်မြတ်သောသတ္တုများကို အသုံးပြုနိုင်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ဝတ်ရတနာများတွင် အသုံးပြုသည့် အခြားအချို့လည်း ရှိသေးသည်။
ဤနေရာတွင် သင်သည် မကြာသေးမီက ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေသည့် ထုတ်ကုန်အချို့လည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်၊ ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များ, etc
အပန်းဖြေခြင်း- 3D ပရင်တာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အရာများ
မမေ့ရအောင် အားလပ်ချိန်ဒါက အိမ်သုံး 3D ပရင်တာ တော်တော်များများအတွက် သုံးတဲ့ အရာပါ။ ဤအသုံးပြုမှုများသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် ပံ့ပိုးမှုဖန်တီးခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပိုပစ္စည်းများ တီထွင်ခြင်းအထိ၊ သင်နှစ်သက်သော စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်များ၏ ရုပ်ပုံများကို ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ DIY ပရောဂျက်များအတွက် ဖြစ်ရပ်များ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ခွက်များ စသည်တို့အထိ အလွန်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကျိုးအမြတ်မယူသော အသုံးအဆောင်များအတွက် ဖြစ်သည်။
များသော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် 3D ပရင်တာတွေကို အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အားသာချက်များကြောင့်သာမက တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဒီဇိုင်းတစ်ခု၏ ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်၊ ပေါင်းထည့်ခြင်း၊ မှိုအသုံးပြုခြင်းစသည့် ရိုးရာနည်းလမ်းများဖြင့် ၎င်းကို ဖန်တီးရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤပရင်တာများသည် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ ပုံနှိပ်ခြင်းအပါအဝင် အလွန်ကွဲပြားသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြုလာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အစိတ်အပိုင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း သာမာန်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်များအတွက်အလွန်ပေါ့ပါးပြီး ပိုမိုထိရောက်သော အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ရရှိစေသောကြောင့် လေယာဉ်အတွက်ပင်။ အဲယားဘတ်စ်၊ ဘိုးရင်း၊ ဖာရာရီ၊ မက်လာရန်၊ မာစီဒီး အစရှိတဲ့ အကြီးစားကြီးတွေ ရှိနေပြီလေ။
ဆေးပညာတွင် 3D ပရင်တာများ- သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ ခြေတုလက်တုများ၊ ဇီဝပရင့်ထုတ်ခြင်း။
3D ပရင်တာများကို အသုံးပြုရန် နောက်ထပ် ကဏ္ဍကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်. ၎င်းတို့ကို ရည်ရွယ်ချက်များစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာ ခြေတုလက်တုများအပြင် ကွင်းစွပ်များ စသည်တို့ကို ပိုမိုတိကျစွာ ထုတ်လုပ်ပါ။
အနာဂါတ်အစားထိုးမှုများအတွက် အရေပြား သို့မဟုတ် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကဲ့သို့သော တစ်ရှူးများကို ဇီဝပရင့်ထုတ်ခြင်း။
အရိုး၊ မော်တာ သို့မဟုတ် ကြွက်သားပြဿနာများအတွက် အခြားသော ခြေတုအမျိုးအစားများ။
ပုံနှိပ်အစားအစာ / အစားအစာ
3D ပရင်တာများကို ပန်းကန်ပြားများပေါ်တွင် အလှဆင်ဖန်တီးရန် သို့မဟုတ် အချို့သောပုံသဏ္ဍာန်ရှိ ချောကလက်ကဲ့သို့ ချိုချဉ်များကို ပုံနှိပ်ရန်နှင့် အခြားအစားအစာများစွာအတွက်ပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်း ၎င်းသည် ဤစက်များ၏ အားသာချက်များကို အသုံးချရန်လည်း ကြိုးပမ်းသည်။
ထို့အပြင်၊ အစားအသောက်ကို အာဟာရပြည့်ဝအောင် မြှင့်တင်ပါ။ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပရိုတင်းများမှ ပြုလုပ်သော အသားလွှာများ ပုံနှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် သဘာဝအသားတွင် ပါရှိနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသော ထုတ်ကုန်အချို့ကို ဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့သော၊ အသားထွက်ကုန်အစစ်များကို အတုယူ၍ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတင်းမှ ဖန်တီးထားသည့် သက်သတ်လွတ်စားသူများ သို့မဟုတ် သက်သတ်လွတ်စားသူများအတွက် ထုတ်ကုန်များဖန်တီးရန် ပရောဂျက်အချို့လည်း ရှိပါသည်။
ထို့အပြင်၊ 3D ပရင်တာများသည် ပညာရေးစင်တာများကို လွှမ်းမိုးစေမည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပညာရေးဌာနများဖြစ်သည်။ အတန်းများအတွက် ကောင်းသောအဖော်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူ၊ ဆရာများသည် ကျောင်းသားများအား လက်တွေ့ကျပြီး အလိုလိုသိသောနည်းဖြင့် သင်ယူနိုင်စေရန် သို့မဟုတ် ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင် ၎င်းတို့၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး Resin 3D ပရင်တာများ
3D ပရင်တာ အပိုပစ္စည်းများ
3D ပရင်တာများအတွက် အမျှင်များနှင့် အစေးများ
အကောင်းဆုံး စက်မှု 3D ပရင်တာများ
အိမ်အတွက် အကောင်းဆုံး 3D ပရင်တာများ
အကောင်းဆုံးစျေးပေါ 3D ပရင်တာများ
အကောင်းဆုံး 3D ပရင်တာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
STL နှင့် 3D ပရင့်ဖော်မတ်များအကြောင်း အားလုံး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ပုံနှိပ် 3D » 3D ပရင်တာများအတွက် အဆုံးစွန်လမ်းညွှန်
3D ပရင်တာအမျိုးအစားများနှင့် ၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
Schottky diode: အဲဒါက ဘာလဲ။